MITOMANY HANAO BEN’NY TANANA RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
MITOMANY HANAO BEN’NY TANANA RAJOELINA
Nitohy tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana.Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny fandraisam-pitenenana ataon’ireo mpitarika tonga eny an-toerana. Ny Ct Rasoamalala Odette Brenda dia nampita vaovao tamin’ny vahoaka momba ny zavamisy any Ambatondrazaka. Raha nisy ny fanonganam-panjakana hoy izy dia ny mpiasan’ny Rnm sy Tvm tany dia niharan’ny antsojay. Nakatona ny Tvm hoy izy ary nidirana ankeriny ka ny vaovao rehetra avy amin’ny zanak’idada dia tsy navela havoaka.Rehefa natao ny fanadihadiana hoy Brenda dia hay diploma sandoka no nampiasain-dRamatoa mpitantana. Ankehitriny dia naiditra hopitaly io olona io ary lazaina fa adala. Ny ministry ny serasera hoy izy dia miaro io olona io. Olona efa mpisoloky ve tsy henjehina hoy Brenda fa namanareo. Manana porofo amin’izany rehetra izany izahay. Ny Ct Raveloson Constant kosa dia nanambara fa misoloky Rajoelina fa raha tsy nisoloky izy dia Edgard no niaraka taminy tamin’ny fitetezana Tanana. Rajoelina hoy izy dia mitomany hanao ben’ny Tanana. Ny hetra sy ny tetibolam-panjaka no tadiaviny hanajany antsika. Dia milaza izy hoe tonga aho hanatatanteraka ny asa tsy vita hatramin’izay naha ben’ny Tanana izay. Momba ny fitaterana dia nambaran’I Constant fa raha mpanao fitaterana ianao dia ho avy ny fifanianana eto an-toerana. Misy hoy izy ny naman-dry zalahy tsy hampadoavina hetra ary dia ho avy koa ny sasany. Rehefa tsy msiy volam-panjakana eto hoy Constant dia totovodibasy no hitazonana ny fanjakany sy ny trafika rehetra ary ny fivarota tanindrazana. Aoka hoy izy hihorokoditra isika rehefa manao ronono an-tavy Rajoelina. Ny sezan-dry zalahy no atahorany hihozongozona. Mivarina any amin’ny fanjakan’ny rononon an-tavy isika. Io mivarotra taindrazana io no ataony dia mahazo vola izay, ka mahazo izany ve ianareo hoy izy nametra fanontaniana tamin’ny vahoaka. Tsy hoe rehefa lany ihany na maina vao hivarotra hoy Constant fa efa fanaony hatramin’izay io. Koa hafatrahoy izy no apetraka amin’ny dadany dia mba hampianaro ihany nyy zaza fa mbola tanora. Mahakasika ny raharaha any Atsimo dia nilaza izy fa Rakotoarimasy izay niantso “forces armées de l’ocean indien” miaramila frantsay hanampy azy any Atsimo. Loza amin’atambo hoy izy , fa hay ve tsy vita ny any dia miantso vazaha. Efa misy 150 mahery ny miaramila frantsay manao fitafiana Malagasy any amin’ny birao any amin’izao fotoana izao. Nandimby ilay jeneraly Bokino mpanolontsaina tamin’ny taona 1971 hoy izy izany izay namono olona tany Atsimo. Ny Ct Randriamamiarizafy Ignace dia nilaza fa lasa raharaha iraisam-pirenena I Remenabila. Rhefa niteny hoy izy ny Praiministra tamin’ny vondrona iraisam-pirenena dia nilaza fa tsy misy fiatraikany amin’ny fifidianana ny any Atsimo. Izahay kosa hoy Ignace dia milaza fa misy fiatraikany amin’ny fifidianana io raharaha any Atsimo satria mitsoaka ny mponina. Moa ve hoy izy nahavita fanisam-bahoaka ireo olona ireo ? Afaka hifidy izy ireo. Heveriny fa tsy misy dikany ireny olona ireny.Mivaralila tanteraka hoy izy io fitondrana io satria ny sasany dia efa milaza fa tokony diniky ny Malagasy no atao. Rajoelina ihany koa milaza fa tsy maninona ny dinika any ambadika any.
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 novembre 2012 29 novembre 2012 Catégories Politique
4 pensées sur “MITOMANY HANAO BEN’NY TANANA RAJOELINA”
29 novembre 2012 à 19 h 44 min
Sady mapmė no manome LITIKA!!
fa mbola misyhantenaina na handrasana ve @’ity Beriziky ray olona no ahagaga
izay lazainy eo a!!BOLOKY anie iny sisa e!!!izy sy MANGIDY dia tsy musy hafa fa sady tsy hiira
no tsy hanao tsianjery fa dia MIBAHAN-TOERANA fotsiny ary ny tena LOZA a?? manamafy ny SEZAN’i
domelina Sisa hataon’izy mitsamy ireo, VONGANY BE FOTSINY.
29 novembre 2012 à 22 h 41 min
Ho voatoraky ny tapa-biriky eny an-tampon-dohany eny laikely iyn fa aleo
hitonantonana hanao ben’i tanana eo, tsy mahalala tsy tiana izany raha olona a!!!
MAHONENA!!!MANKALEO!!!!fa mitetika ny hiala maina angaha ity izy koa hikisaka kely etsy ????tena nadra !!!
Tsy hainy fa ny olona efa malikiliky @’ity domelina be .
30 novembre 2012 à 5 h 38 min
Mazava sy marina daholo izay ambaranareo, efa tsapan’ny be sy ny maro, fa INONA NO PAIK’ADY IATREHAN ILAY IZY,mba ahatongavana @ tanjona, fa toa tsy ampy intsony oa ity mitanisa zavatra efa fantatra ity.
Amstrong, valiny :
– Fanampiana an’ireo OLONA, izay hanao ankety MAHALEO TENA (Tsy any atsimo ihany no misy dahalo) ; izay rehetra manana porofo, sary tamin’ny 26 -27 janvier 2009, 7 février 2009, manifs rehetra, ets…..Fandrahonana sy famonoan’olona dia tokony hanome !
– Fampiarana an’ilay tondrozotra, araky ny toro-hevitr’Ingahy Louis Michel
Précédent Article précédent : TSY MAINTSY MIVERINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Suivant Article suivant : NAIKA ELIANA : TSY MATAHOTRA FISAMBORANA NY TENAKO